Efa fantatray ny maody maizin'ny WhatsApp ho an'ny Android | Vaovao momba ny gadget
Efa fantatray ny maody maizin'ny WhatsApp ho an'ny Android
Izahay mitondra efa ho herintaona nihainoana miresaka momba maody maizina ho an'ny WhatsApp, fa ity kosa tsy mahavita tonga. Raha iray amin'ireo manantena izany ianao dia manana vaovao tsara ho anao anio. Toa izany ny fanavaozana ny fampiharana hafatra farany dia efa akaiky. Ary amin'ity indray mitoraka ity eny, hanana safidy isika amin'ny farany hampavitrika ilay maody maizina andrasana.
Na dia mbola tsy manana daty ofisialy izahay ho an'ny fandefasana azy, toy ny mahazatra. Afaka nahita ny sarin'ny kinova Beta izay ny mombamomba azy dia toa namboarina hampiasa maody maizina. Misy zavatra miaraka amin'ny safidy "system default" hovelomina ho azy rehefa nampavitrika ny maody maizina amin'ny rafitra fiasa izahay.
Midina ny maizina ho an'ny WhatsApp
Ny fanavaozana ny WhatsApp izay ahitantsika ny maody maodely manome fanovana hatsarana ihany koa amin'ny fampiharana. Ho hitantsika ny fisehoana nohavaozina ary bebe kokoa mifanaraka amin'ny fanavaozana ny Apps lehibe. Ny aloky ny menio WhatsApp dia manomboka manana loko mafana sy maizina kokoa. Noho izany, ny fanovana ny maody maizina dia milamina kokoa ary tafiditra tsara ao anatin'ny rafitry ny fiasanay.
Ratsy be ve ny maizina? Ny tena marina dia ny fieritreretana ny rafitra fiasa na fanavaozana ny fampiharana izay manana «maody lehibe» manana maody maizimaizina dia mamela be ny faniriana. Na dia tsy maintsy miaiky aza isika, indrindra rehefa manandrana Apps hafa, dia ny tahiry angovo azo aorian'ny fampiasana dia miavaka. Ary ambonin'izany rehetra izany amin'ny tontolo maizina, mahazo aina kokoa ny famakiana ary tsy dia manimba ny maso.
Toa izany ho vonona tanteraka ny fampiharana, farafaharatsiny amin'ny lafiny fisehoan'ny interface sy ny endrika namboarina tamin'ny maody maizina. Izahay dia afaka nahafantatra aza fa ireo sary an-tsary izay ananantsika ankehitriny dia hijanona, eny, namboarina mba tsy ho mamiratra na manelingelina ny fampiasana ny maizina. Ho fanampin'ny fampiharana ny safidin'ny ny ka averiko maody maizina fantatsika fa tsy ho voafetra ihany io mba handokoana ny fampiharana mainty be mpampiasa. Ny «maizina mode» izy io dia mifototra amin'ny tonony "night blue" izay hampandeha maso ny fanovana ny feo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » WhatsApp » Efa fantatray ny maody maizin'ny WhatsApp ho an'ny Android
Ireto ny lalao ho ampidirin'i Google Stadia amin'ny fandefasana azy
Energy Sistem sy Decathlon dia hanaiky ny Bizum ho toy ny fitaovana fandoavam-bola